Amniga Badbaadada, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Baybalku wuxuu xaqiijinayaa in kuwa ku sii jira iimaanka xagga Ciise Masiix waa la badbaadin doonaa oo weligood waxba kama qaadi doonaan gacanta Masiixa. Baybalku wuxuu adkeynayaa aaminnimadiisa xad dhaafka ah ee Rabbiga iyo ku filnaanshaha buuxda ee Ciise Masiix badbaadadeenna. Waxa kale oo ay ina tusaysaa jacaylka weligiis ah ee Eebbe u leeyahay dadyowga oo dhan, waxayna Injiilka ku sheegaysaa inuu yahay xoogga Eebbe badbaadinta kuwa rumaysta oo dhan. Haysashada hubaalkan badbaadada, rumeelaha waxaa la weydiisanayaa inuu ku sii nagaado iimaanka oo uu ku koray nimcada iyo aqoonta Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix. (Yooxanaa 10,27: 29-2; 1,20 Korintos 22: 2-1,9; 1 Timoteyos 15,2: 6,4; 6 Korintos 3,16: 1,16; Cibraaniyada 4,14: 2-3,18; Yooxanaa; Rooma; Cibraaniyada) ,; Butros)
Ka waran "amniga weligeed ah?"
Caqiidada "xasillooni waara" waxaa loogu yeeraa "adkaysashada quduusiinta" luuqadda fiqi ahaaneed. Wadaagga guud waxaa lagu sharaxay weedha "mar badbaadi, marwalba badbaadi", ama "mar Masiixi ah, marwalba Masiixi ah".
Qorniinka badan ayaa ina siiya hubaal in aan mar hore badbaado haysano, in kasta oo ay tahay inaan sugno sarakicidda si aan ugu dambeyntii u dhaxalno nolosha weligeed ah iyo boqortooyada Ilaah. Waa kuwan qaar ka mid ah ereyada Axdiga Cusub adeegsadaan:
Oo kii rumaysta wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah (Yooxanaa 6,47) ... ku alla kii arka wiilka oo rumaysta isaga wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah; oo isagaan sara kicin doonaa maalinta u dambaysa (Yooxanaa 6,40) ... Oo waxaan iyaga siiyaa nolosha weligeed ah, weligoodna ma lumi doonaan, oo ninna kama dhufsan doono gacantayda (Yooxanaa 10,28) ... Markaa ciqaab ma leh kuwa ku jira Ciise Masiix (Rooma 8,1) ... [Waxba] kama sooci karaan jacaylka Ilaah, kaasoo ah Masiixa Rabbigeenna ah (Rooma 8,39) ... [Masiix] sidoo kale wuxuu kugu sii hayn doonaa ilaa dhamaadka (1 Korintos 1,8) ... Laakiin Ilaah waa aamin, kan kuu oggolaan maayo inaad tijaabiso xooggaaga (1 Korintos 10,13) ... oo isagu ka dhex bilaabay shaqadii wanaagsanaa, isna wuu dhameystiri doonaa (Filiboy 1,6) ... Waxaan ognahay inaan nolosha ku soo galnay dhimashada (1 Yooxanaa 3,14).
Caqiidada nabadgelyada weligeed ah waxay ku saleysan tahay dammaanad qaadyadaas. Laakiin waxaa jira dhinac kale oo khuseeya badbaadada. Waxa kale oo jira inay jiraan digniino sheegaya in Masiixiyiintu ka dhici karaan nimcada Ilaah.
Masiixiyiinta waxaa looga digayaa: "Ku alla kii u maleeya inuu taagan yahay wuu arki karaa inuusan dhici doonin" (1 Korintos 10,12). Ciise wuxuu yidhi: "Soo jeeda oo tukada inaydnaan jirrabaadda gelin." (Markos 14,28), iyo «jacaylku qabow badan ayuu ku qaboobi doonaa» (Matayos 24,12). Rasuul Bawlos wuxuu qoray in qaar ka tirsan kaniisadda "rumaystaan
Waxaa ku dhacay shil markab » (1 Timoteyos 1,19). Kaniisadda ku taal Efesos waxaa looga digay in Masiixu ka saari doono laambadkeeda isla markaana afkiisa ka saari doono luqunnada Laodiceans. Talada ku jirta Cibraaniyada 10,26: 31 gaar ahaan waa mid aad u xun:
Sababtoo ah hadaan si ula kac ah ugu dembaabno ka dib markaan helno aqoonta runta, ma lihin allabaryo kale oo dembiyada, laakiin wax aan ahayn waxaan sugi lahayn xukunka iyo cadaabta hunguri xumada ee cadaawayaashu cuni doonaan. Haddii qof ku xadgudbo sharciga Muuse, waa inuu dhintaa isagoo aan u naxariisan laba ama saddex markhaati. Intee in le'eg ciqaab aad u badan ayaad u maleyneysaa inuu ku kasban doono kuwa ku xadgudbaya Wiilka Ilaah oo u maleeya in dhiigga axdigu uu nijaas yahay, oo isaga quduus lagaga dhigay, oo uu caayo Ruuxa nimcada? Sababtoo ah waan ognahay kan yidhi: Aargudashada anigaa leh, Waxaan doonayaa inaan abaalmariyo, oo haddana, Oo Rabbigu dadkiisa wuu xukumi doonaa. Waa wax laga cabsado in lagu dhaco gacmaha Ilaaha nool. »
Cibraaniyada 6,4: 6 sidoo kale waxay na siinayaan sabab aan uga fiirsanno:
«Sababtoo ah Suuragal uma aha kuwa kuwii mar la iftiimiyey oo dhadhamiyay, oo la siiyey hadiyadda jannada oo ay la wadaagaan Ruuxa Quduuska ah oo dhadhamiyey eraygii wanaagsanaa ee Ilaah iyo awoodaha dunida mustaqbalka ka dibna u dhacay inay mar kale cusboonaysiiyaan toobadda. , maxaa yeelay, mar kale ayay iskutallaabta ku qodbaan wiilka Ilaah, wayna ku qoslaan. »
Markaa axdiga cusub baa jira. Aayado badan ayaa ka run sheegaya badbaadada weligeed ah ee aan ku leenahay Masiixa. Badbaadkan ayaa u muuqda mid hubaal ah. Laakiin aayadaha noocan oo kale ah waxaa daciifiyey digniinaha qaar u muuqda kuwa sheegaya in Masiixiyiintu ku waayi karaan badbaadadooda caqiido la'aan.
Tan iyo su'aasha badbaadada weligeed ah ama in Masiixiyiintu badbaado yihiin - taasi waa, mar haddii la badbaadiyo, marwalba waa la badbaadiyo - badiyaa waxay ka soo baxdaa sababtoo ah Qorniinka sida Cibraaniyada 10,26: 31, markaa aynu si dhow u eegno qoraalkan. Su’aashu waxay tahay sidee ayaan u fasirnaa aayadahan? Kumaa qoraagu u qorayaa, oo waa maxay nooca "rumaysad darradu" ee dadku maxayse qaateen?
Aynu marka hore eegno farriinta warqaddan ee Cibraaniyada oo dhan. Nuxurka buuggan ayaa ah baahida loo qabo in lagu rumeeysto Masiixa inuu yahay allabari ku filan dembiyada. Ma jiraan tartamayaal. Rumaysadku waa inuu ku salaysnaado kaligiis. Aayadda ugu dambeysa ee cutubkan ayaa caddeynaysa su'aasha ah suuragalnimada suurta galka badbaadada ee aayadda 26aad: "Laakiin innagu kama mid nahay kuwa noqday oo la cambaareeyay, laakiin waxaan nahay kuwa rumeeyey ee naf naarta" (V. 26). Qaar baa dib u dhacay, laakiin kuwa ku sii jira Masiixa lama lumi doono.
Dammaanad isku mid ah kuwa aaminka ah waxaa laga heli karaa aayadaha ka hor Cibraaniyada 10,26. Masiixiyiintu waxay ku kalsoon yihiin joogitaanka Ilaah xagga dhiigga Ciise (V. 19). Waxaan ugu tagi karnaa Ilaah aaminaad qumman (V. 22). Qoraagu wuxuu Masiixiyiinta kula dardaarmayaa ereyadan soo socda: “Aynu ku sii adkeyno qirashada rajo ee ma lihin. maxaa yeelay isagu waa aamin aamin ah (V. 23).
Hal dariiqo oo lagu fahmo aayadahan Cibraaniyada 6 iyo 10 ee ku saabsan “dhumida” waa in akhristayaasha la siiyaa xaalado male-awaal ah oo lagu dhiirigeliyo inay ku adkeystaan ​​waxay rumeysan yihiin. Tusaale ahaan, aynu eegno Cibraaniyada 10,19: 39. Isagoo maraya Masiixa, dadka uu lahadlayo waxay leeyihiin "xoriyad inay galaan meesha quduuska ah" (V. 19). Waad “ka gudbi kartaa Ilaahay” (V. 22). Qoraagu wuxuu u arkaa dadkani inay yihiin "kuwa xajiya qirashada rajada" (V. 23). Wuxuu doonayaa inuu ku kicinayo inay jeclaadaan xitaa inay sii jeclaadaan oo ay rumaystaan (V. 24).
Iyadoo qayb ka ah dhiirigelintani, wuxuu sawiraa sawir waxa ku dhici kara - si maskaxiyan ah marka loo eego aragtida ku xusan - "oo si kas ah ku adkeynaya dembiga" (V. 26). Si kasta oo ay ahaataba, dadka uu lahadlayo ayaa ah kuwa "la iftiimiyey" oo aaminka ku ahaa inta lagu jirdilay (Aayadaha 32aad). Waxay "aaminaadooda" ku qabaan Masiixa isla markaana qoraa ayaa ku dhiirrigaliyay inay ku adkaystaan ​​iimaanka (Aayadaha 35aad). Ugu dambayntii wuxuu ka yidhi dadka uu qoro waxaan ka mid nahay kuwa noqda oo la cambaareeyaa, laakiin waxaan nahay kuwa rumeeyey nafna badbaadin » (V. 39).
Aynu sidoo kale la soconno sida qoraagu u soo afjaray digniintiisii ​​ku saabsanayd “ka soo noolaanshaha iimaanka” ee Cibraaniyada 6,1: 8: "In kasta oo aan sidan ugu hadlayno, gacaliyayaalow, haddana waxaan rumeysan nahay inay wanaag kuu ahaan doonto oo waad badbaadi doontaa . Maxaa yeelay, Ilaah xaqdarro ma aha inuu ilaawo shaqadaada iyo jacaylka aad magiciisa ku muujisay adigoo u adeeganaya oo weli u adeegaya quduusiinta. (Aayadaha 9aad). Qoraaga ayaa sii wata isagoo sheegaya inuu waxyaalahan u sheegay si ay "u muujiyaan isku dadaal si ay rajo u yeeshaan illaa ugu dambaynta" (V. 11).
Markaa waa macquul in laga hadlo xaalad uu qof rumaysad dhab ah ku lahaa Ciise lumin karo. Laakiin haddii aysan suurtagal ahayn, digniinta ayaa ku habboon oo waxtar leh?
Masiixiyiintu miyay lumin karaan caqiidadooda adduunka dhabta ah? Masiixiyiintu waa "ku dhici karaan" dareenka in ay dembiyo galeen (1 Yooxanaa 1,8: 2,2). Waxay ku noqon karaan caajis maskax ahaan xaaladaha qaarkood. Laakiin tani miyay mararka qaarkood u horseedaa "dhicitaan" kuwa kuwa rumaysadka leh Masiixa? Tanina gebi ahaanba kama cadda kitaabka. Runtii, waxaan weydiin karnaa sida qof u noqon karo "run" Masiixa isla markaana "ku dhici" isla waqtigaas.
Mowqifka Kaniisadda, sida lagu muujiyay aaminsanaanta, ayaa ah in dadka leh iimaan waarta oo Ilaah uu siiyay Masiixa aan weligiis gacantiisa laga jeexin karin. Si kale haddii loo dhigo, marka iimaanka qofku diiradda saarayo Masiixa, isaga ama iyadu lumin maayaan. Mar alla inta Masiixiyiintu qirayaan qirashadan rajada, badbaadadooda waa hubaal.
Su’aasha ku saabsan caqiidada “mar badbaadi, had iyo jeer badbaadi” waxay la xiriirtaa bal inaan lumi karno caqiidadeena Masiixa. Sidii aan horayba u soo sheegnay, warqaddii ay u qortay Cibraaniyada waxay umuuqataa inay qeexeyso dadka ugu yaraan "caqiidadii" hore laakiin qatar ugu jiri kara.
Laakiin tani waxay caddaynaysaa barta aan ku samaynay cutubkii hore. Sida kaliya ee looga lumi karo badbaadada waa in la diidaa jidka keliya ee badbaadada - aaminaadda Ciise Masiix.
Warqadda Cibraaniyada waxay ugu horreyntii ka hadlaysaa dembiga rumaysad darrada ah ee badbaadada shaqadiisa, ee uu ku dhammaystiray Ciise Masiix (eeg tus. Cibraaniyada 1,2: 2,1; 4: 3,12-14; 3,19: 4,3; 4,14;). Cibraaniyada, cutubka 10aad, waxay si aada uga jawaabeen su'aashan aayadda 19aad, iyagoo tixraacaya inaan xorriyad iyo kalsooni buuxda ku haysanno Ciise Masiix.
Aayadda 23aad waxay na dhiirrigelinaysaa inaan sii wadno qirashada rajadeenna. Waxaan si dhab ah u ognahay waxa soo socda: inta aan sii wadno qirashada rajadeenna, runtii hubaal waan hubaa oo ma lumin karno badbaadadeenna. Qirashadan waxaa ka mid ah aaminsanaanta dib-u-heshiisiinta Masiix ee dembiyadeenna, rajada aan ku qabno nolol cusub oo isaga ku jirta, iyo daacadnimadeena joogtada ah ee aan u qabno noloshan.
Had iyo jeer uma cadda kuwa adeegsada hal-ku-dhigga "mar la badbaadiyey, marwalba la badbaadiyey" waxa ay uga jeedaan. Erayadani macnaheedu maahan in qof la badbaadiyey si fudud maxaa yeelay asaga ama ayada waxay yiraahdeen dhowr erey oo ku saabsan Masiixa. Dadku way badbaadaan markay helaan Ruuxa Quduuska ah, markay dib ugu dhashaan nolol cusub oo Masiixa ah. Rumaysad run ah waxaa lagu muujiyaa aaminnimada Masiixa, taas micnaheedu waa inaanan mar dambe nafteenna u noolaan doonin laakiin tahay Bixiyaha.
Muhiimadu waxay tahay inaan badbaado ku nahay Masiixa inta aan sii wadno ku noolaanshaha ciise (Cibraaniyada 10,19: 23). Waxaan ku kalsoonahay kalsooni buuxda oo uu isagu ku qabo maxaa yeelay isagu waa kan ina badbaadiya. Ma aha inaan walwalno oo aan su’aasha weydiino. "Miyaan sameyn doonaa?" Masiixa dhexdeeda nabadgelyadeynu ku haysannaa - annagaa leh isaga waannu badbaadi doonnaa oo waxbana gacantiisa lagama qaadi karo.
Sida kaliya ee aan ku waayi karno ayaa ah inaan ku tumanno dhiiggiisa oo aan go’aansanno in aakhirka aan u baahnayn isaga oo aan nafteenna ku filan nahay. Haddii ay taasi taasi ahaan lahayd, kamaanaan walwal qabnay inaan nafteena badbaadinno. Ilaa iyo inta aan aaminka ku nahay Masiixa, waxaan haysannaa hubin ah inuu dhamayn doono shaqadii uu inaga dhex bilaabay.
Arrinta raaxada leh ayaa ah tan: waa inaanan ka walwalin badbaadadeenna oo aan dhahno "Maxaa dhacaya haddii aan ku guul darreysto?" Horaan u fashilnay. Waa Ciise kan na badbaadiya mana uusan lumin. Miyaan ku guul daraysan karnaa inaan aqbalno? Haa, laakiin sida Masiixiyiin ruuxi ah oo hoggaaminay, kumaanaan guuleysan inaynu aqbalno. Markaan aqbalno Ciise, Ruuxa Quduuska ahi wuu inagu dhexjiraa, kan innaga beddelay muuqaalkiisa. Waxaan leenahay farxad, ma baqayo. Nabad baan ku joognaa, ma cabsanno.
Haddii aan aaminsanahay ciise masiix, waxaan joojineynaa walwalka ah inaan "qaban karno". Isagu "wuu ka dhigay" annaga. Waan ku nasanay. Waxaan joojinaynaa walwal. Waxaan aaminsanahay oo aan aaminsanahay, oo aan nafteena ahayn. Sidaa darteed, su'aasha ah haddii aan lumin karno badbaadadeenna ma mar dambe ina silcinayso. Sabab? Sababtoo ah waxaan aaminsanahay shaqada Ciise ee iskutallaabta iyo sarakiciddiisa inay tahay waxaan u baahanahay.
Eebbe uma baahna dhammaystirkeenna. Waxaan u baahanahay isaga, oo isagaa wuxuu inoogu deeqay hadiyad ahaan annagoo rumeysan Masiixa. Kama adkaan doonno maxaa yeelay badbaadadeenna naguma xirna.
Marka la soo koobo, Kaniisadda waxay aaminsan tahay in kuwa ku sii jira Masiixa aan lumin doonin. Adigu weligaa nabad baad tahay. Laakiin waxay kuxirantahay waxa ay dadku ula jeedaan markay yiraahdaan "mar badbaadi, marwalba badbaadi".
Ilaa hadda caqiidada saadaalinta, waxaan ku soo koobi karnaa booska kaniisadda ereyo dhowr ah. Ma aaminsani in Ilaah had iyo goor go’aansaday cidda luntay iyo cidda aan khasaarin doonin. Waa aragtida Kaniisadda ee ah in Ilaah ku bixin doono qaab xaq ah oo caddaalad ah dhammaan kuwa aan ku helin nolosha injiilka. Dadka noocaas ah waxaa lagu xukumi doonaa si isku mid ah annaga, taas oo ah, haddii ay aaminkooda iyo caqiidadooda ku yihiin Ciise Masiix.